UYILUNGISA NJANI IMIFANEKISO YETUMBLR ENGAFAKWANGA IMPAZAMO - ITHAMBILE
I-Tumblr lolunye usasazo lwentlalo kunye neqonga leebhlogi ezincinci apho abasebenzisi banokuthi bathumele iibhloko zabo kunye nomnye umxholo ngokwenza iprofayili. Abasebenzisi banokuhamba nemifanekiso, iividiyo, kunye neeblogi ezithunyelwe ngabanye abantu eqongeni. I-Tumblr isenokungabi lelona qonga losasazo laziwayo kwezentlalo, kodwa izuza igama kwimarike enabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-472 ababhalise eqongeni.
Ngelishwa, abasebenzisi abaninzi bakhalaza ngemifanekiso engalayishwanga kwiTumblr. Ewe, njengalo naliphi na iqonga leendaba ezentlalo, iTumblr nayo inokuba nemicimbi yezobuchwephesha okanye iimpazamo ezinobunzima ngoku. Kule nqaku, siza kuthetha ngezizathu ezinokubangela ukuba imifanekiso ingalayishi kwiTumblr kwaye ibuye ibhale phantsi izisombululo zokulungisa imifanekiso yeTumblr engalayishi impazamo.
uqhagamshelo olungasasebenziyo ukuseta kwakhona i-chrome mac
Izizathu zokuthi iTumblr ingalayishi imifanekiso
Indlela yoku-1: Jonga uqhagamshelo kwi-Intanethi
Indlela yesi-2: Sebenzisa esinye isiKhangeli
Indlela yesi-3: Khubaza u-U-block ulwandiso
Indlela 4: Sebenzisa isoftware yeVPN
Indlela yesi-5: Jonga ukuba iiseva zeTumblr ziphantsi na
Zininzi izizathu ezinokubangela impazamo kwiTumblr kwaye ikuthintele ekulayisheni imifanekiso. Apha ngezantsi kudweliswe ezinye zezizathu eziqhelekileyo zokuba iTumblr ingalayishi imifanekiso.
1. Unxibelelwano lweintanethi olungazinzanga: Ukuba ufumana unxibelelwano lwe-intanethi olungazinzanga kwiPC yakho okanye kwifowuni, unokujongana nemifanekiso engalayishi mpazamo kwiTumblr.
2. Ukugcwala kweseva: Imiba yemifanekiso engalayishwanga inokuba ngenxa yokugcwala kakhulu kwiseva yeTumblr. Ukuba abasebenzisi abaninzi bakwi-Intanethi bonke ngaxeshanye, iiseva zinokulayisha ngaphezulu.
3. Izithintelo kumxholo othile: I-Tumblr ithintela umxholo othile ongalunganga kwabanye abasebenzisi. Ngapha koko, iqonga likwanqanda umxholo othile kumazwe ahlukeneyo okanye kumazwe. Ezi zithintelo zinokuthintela ekulayisheni imifanekiso.
Zine. U-Vimba i-AddON: Kukho izongezo ezininzi kwisikhangeli sewebhu onokongeza kuthintelo kunye nokubhloka okuzivelelayo. U-Block Addon iyafumaneka njengenye yokongeza ethintela iiwebhusayithi ukuba zingabonisi iintengiso kwaye inokuthintela iiwebhusayithi eziyingozi kwikhompyuter. Kukho amathuba okuba u-U-Block AddOn unokuthintela imifanekiso kwiTumblr.
Sidwelisa iindlela ezimbalwa onokuthi uzilandele ukulungisa imifanekiso engalayishi mpazamo kwiTumblr.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ngaphambi kokuba uqhubeke nayiphi na enye indlela kukujonga unxibelelwano lwakho lwe-intanethi. Ukuba unonxibelelwano lwe-intanethi oluhlwempuzekileyo okanye olungazinzanga, unokuhlangabezana neengxaki zokungena kwiakhawunti yakho yeTumblr, uyeke ukulayisha imifanekiso eqongeni. Ke ngoko, ukulungisa imifanekiso yeTumblr engalayishi mpazamo, ungajonga ngokulandela la manyathelo akhankanywe apha ngezantsi:
1. Qala ngokuqala kwakhona i-router yakho. Susa intambo yombane kwaye uphinde uyivale emva komzuzu okanye njalo.
2. Sebenzisa i Uvavanyo lwesantya se-intanethi ukujonga isantya sakho se-intanethi.
3. Okokugqibela, qhagamshelana nomboneleli wakho wesevisi ye-intanethi ukuba unesantya esisezantsi se-intanethi.
Abasebenzisi abaninzi beTumblr bakwazi ukulungisa imifanekiso engalayishi impazamo ngokutshintshela kwesinye isikhangeli. Umzekelo, ukuba usebenzisa iGoogle Chrome, ukusombulula ingxaki, ungatshintshela kwizikhangeli ezinjengeOpera, iMicrosoft Edge, okanye abanye.
Nangona kunjalo, sicebisa ukutshintshela kwi-Opera njengoko ibonelela ngeempawu ezintle kunye namava okhangela ngokukhawuleza. Ngapha koko, uya kufumana i-adblocker eyakhelweyo, eya kuthi ithintele naziphi na izinto ezivelayo. Ngapha koko, i-Opera ibonelela ngeqonga elikhuselekileyo, kwaye iya kusombulula iTumblr ingalayishi impazamo yemifanekiso.
Funda kwakhona: Lungisa iiBlogs zeTumblr ezivulekileyo kuphela kwiMowudi yeDashboard
Kwimeko apho ufake i-U-Block ulwandiso kwisikhangeli sakho, unokufuna ukukhubaza kuba kunokwenzeka ukuba ulwandiso lubhlokile imifanekiso ethile kwiTumblr kwaye ikuthintele ekuyilayishweni. Ke ngoko, ukulungisa imifanekiso yeTumblr engalayishi mpazamo, unokulandela amanyathelo akhankanywe apha ngezantsi ngokwe-browser yakho.
Ukuba usebenzisa uGoogle Chrome, emva koko unokulandela amanyathelo anikiweyo ukukhubaza ulwandiso lwe-U-Block.
1. Qalisa iGoogle Chrome okanye ukuba sele usebenzisa isikhangeli, yiya kwithebhu entsha.
2. Ngoku, nqakraza kwi amachaphaza amathathu amileyo kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini ukufikelela kwimenyu.
my imidlalo ye-Android ngaphandle kwengcambu
3. Hambisa isikhombisi sakho kwi izixhobo ezingaphezulu ukhetho kwaye ukhethe izandiso kwimenyu.
4. Cima i toggle ecaleni kwe U-Vimba okanye u-U-block ukwandiswa kwemvelaphi ukuyikhubaza.
5. Okokugqibela, phinda uqalise isikhangeli sewebhu kwaye ujonge ukuba ingaba impazamo yokulayisha umfanekiso kwiTumblr isonjululwe na.
Amanyathelo ayafana nezinye izikhangeli, kwaye ungabhekisa kwizikrini ezingentla.
Ukuba usebenzisa iMicrosoft Edge njengesikhangeli sakho esingagqibekanga, landela amanyathelo anikiweyo ukukhubaza ulwandiso lwe-U-Block:
1. Qalisa IMicrosoft Edge kwi-PC yakho kwaye ucofe u amachaphaza amathathu amileyo kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini ukufikelela kwimenyu.
2. Khetha Izandiso kwimenyu.
3. Khangela indawo Ulwandiso lwe-U-block kwaye ucofe kwi susa ukhetho lokuyikhubaza.
Umsebenzi awuzukugqitywa ngempazamo 0x00000709
4. Okokugqibela, phinda uqalise isikhangeli sewebhu kwaye uye ku Tumblr.
Ukuba uneFirefox njengesikhangeli sakho esingagqibekanga, nantsi indlela yokukhubaza ulwandiso lwe-U-Block.
1. Vula ifayile ye Isikhangeli seFirefox kwindlela yakho.
2. Cofa kwi imigca emithathu ethe tyaba okanye iqhosha lemenyu kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
3. Ngoku, cofa apha Yongeza Vula uze ukhethe ifayile ye- izandiso okanye imixholo ukhetho.
4. Cofa kwi Ulwandiso lwe-U-block kwaye ukhethe i khubaza ukhetho.
5. Okokugqibela, qala isikhangeli kwakhona kwaye ujonge ukuba ingxaki isonjululwe na.
Funda kwakhona: Iindlela ezili-10 zokuLungisa ukuCothisa iphepha kwiGoogle Chrome
Kwimeko apho ungakwazi ukulungisa imifanekiso yeTumblr engalayishi mpazamo, kunokwenzeka ukuba iTumblr ikuthintele ekufikeleleni kwimifanekiso ethile ngenxa yezithintelo kwilizwe lakho. Nangona kunjalo, ukusebenzisa isoftware yeVPN kunokunceda ukukhupha indawo okuyo kunye nokufikelela kwiTumblr kwiseva yelinye ilizwe. Isoftware yeVPN inokukunceda ngokulula ukudlula kuthintelo lweTumblr kwilizwe lakho okanye kwilizwe.
windows 10 iqhubeka ifuna ukuvuselela
Ngaphambi kokuba ufake isoftware yeVPN, qiniseka ukuba inokuthenjwa kwaye iza ne-bandwidth engenamda. Sincoma le software ilandelayo yeVPN.
Ukuba awukwazi ukulayisha imifanekiso kwiTumblr, kunokwenzeka ukuba iiseva zixinaniswe njengesixa esikhulu sabasebenzisi abasebenzisa iqonga ngaxeshanye. Ukujonga ukuba iiseva zeTumblr ziphantsi, ungasebenzisa imeko yeserver ngokuhamba uye kwi Umtshini osezantsi , Esisixhobo sokujonga imeko yeserver. Nangona kunjalo, ukuba iseva iphantsi, awungekhe wenze nantoni na kuyo Lungisa iTumblr ingalayishi imifanekiso kodwa ukulinda de iiseva ziphakame kwakhona.
Q1. Kutheni le nto imifanekiso ingalayishwa kwiiwebhusayithi?
Ukuba awuyiboni nayiphi na imifanekiso okanye awukwazi ukuyilayisha kwiiwebhusayithi, ke kwiimeko ezininzi, ingxaki ikukuphela kwakho hayi kwiphepha lewebhu. Jonga uqhagamshelo lwakho lweintanethi ngaphambi kokufikelela kwiwebhusayithi. Ingxaki inokuvela ngenxa yoqwalaselo olungalunganga lweseto sesikhangeli. Ke ngoko, qiniseka ukuba uqwalasela ngokufanelekileyo useto lwesikhangeli ngokukhangela kwimenyu yeseto seWebhu. Okokugqibela, qiniseka ukuba ukhubaza naluphi na ulwandiso lwebhloko yentengiso kwisikhangeli njengoko zinokuthi zithintele imifanekiso kwiwebhusayithi.
Umbuzo Kutheni iTumblr ingasebenzi kwiChannel?
I-Tumblr inokudibana neempazamo ezimbi ngoku rhoqo. Ukulungisa iTumblr ayisebenzi kwiChannel, ungaqala kwakhona isikhangeli kwaye ungene kwakhona kwiakhawunti yakho. Enye into onokuyenza kukucacisa iifayile ezigcinwe kwiTumblr. Khubaza intengiso yokuthintela ulwandiso kwisikhangeli seChannel. Okokugqibela, sebenzisa i-VPN ukonakalisa indawo yakho kunye nokufikelela kwiTumblr kwiseva yelinye ilizwe.
Ke, ezi zezinye zeendlela onokuzama ngazo Lungisa imifanekiso yeTumblr engalayishi iimpazamo . Siyathemba ukuba isikhokelo sethu sasiluncedo, kwaye wakwazi ukusombulula ingxaki kwiTumblr. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neli nqaku, zive ukhululekile ukuyishiya kwicandelo lamagqabaza.
Umqhubi irq akekho ngaphantsi ngokulinganayo
Uhlaziyo lweWindows 10 lubambekile kwi-0%
Yenza ubusika bushiye iiwindows 10
ukukhawulezisa i-chrome windows 10
google chrome usebenzisa i-100 cpu
windows 10 umba wokuqhuba we-nvidia